Semalt: Qalabka SEO ee ugu Awooda badan Ganacsiga
Tartankii suuqyada elektaroonigga ah ayaa sii xoogaysanaya, oo xitaa shirkadaha ugu awoodda badan waa inay, waqti ka waqti, kormeeraan sumcadooda internetka.
Sidaa darteed, waxaa jira xulashooyin badan oo loogu talagalay xirfadleyda u maamula websaydhada shirkadaha waaweyn, iyo sidoo kale kuwa loo yaqaan 'bloggers' kuwaas oo hadda bilaabay inay soo jiitaan akhristayaasha cusub.
Haddii aad khabiir tahay ama xitaa bilow tahay, tartamayaashaagu ma sugi doonaan. Marka, noqo midka ugu horreeya si aad u hagaajiso mowqifkaaga internetka: SEO muhiim ayey kuu tahay adiga!
Runtii, SEO waa geedi socod adag oo u baahan adeegsiga aalado dheeri ah. Sanadihii la soo dhaafay, Semalt wuxuu diyaariyey aaladaha ugu fiican ee falanqaynta si loo horumariyo istiraatiijiyadaha SEO ee khuseeya shirkadahaaga. Mustaqbalka ayaa dhow. Sidaa darteed, hubi in boggaaga internet uu maanta leeyahay hogaan horseed ah.
Halkan ka hel aaladaha ugu habboon ee falanqaynta Semalt iyo tabaha kaa caawin doona inaad ku kobciso boggagaaga shabakadaha matoorrada raadinta ugu sareysa: SERP - CONTENT - GOOGLE WeBMASTERS - PAGE SPEED
SERP (Bogga Natiijada Mashiinka Raadinta)
Qaybta SERP waxaa ku jira aalado loogu talo galay falanqaynta falanqaynta websaydhka. Soo ogow ereyada furaha ah ee boggaga internetka uu u shaqeeyo, raadso bogaggaaga taraafikada, oo go’aamiya boosaskooda natiijooyinka raadinta dabiiciga ah. Soo sahamiso qiyamka tartamayaashaada si aad u dhisto istiraatiijiyad horumarineed oo guul leh.
Furaha furaha ee TOP
Warbixintani waxay muujineysaa dhamaan ereyada muhiimka ah ee shabakadaadu u adeegsaneyso natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google, bogagga darajadooda, iyo jagooyinkooda SERP ee ereyga gaar ah.
Ku dar hoosaad-hoosaadyo: waad falanqayn kartaa aasaaskaaga guud iyo qeyb-hoosaadyada ama waad ka saari kartaa si aad u hesho xogta aasaaska aasaaska kaliya.
Mashiinka raadinta: Kuwani waa matoorada raadinta ee horay ugu meeleeyay shabakadaada ugu yaraan hal erey. Liistada waxaa loo kala soocayaa kala-soocidda tirada lambarka furaha.
Natiijadu waxay ku tusaysaa:
Tirada ereyada furaha ah ee TOP: Qeybtan, waxaad kuheli doontaa shax muujinaya tirada ereyada furaha ee TOP waqti kadib. Waxay kaa caawineysaa inaad fiiriso isbeddelada tirada keywords ee websaydhku uu ku fadhiyo Google TOP 1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah.
Keywords qaybinta TOP: Halkan, waxaad ka heli kartaa tirada ereyada muhiimka ah ee websaydhku u adeegsado Google TOP -1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah, marka loo eego taariikh hore.
Darajaynta ereyada furaha ah: halkan waxaa ku yaal jadwal muujinaya ereyada ugu caansan ereyada bogagga boggaga internetka ee loogu talagalay natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google. Waxaad ka heli kartaa boosaskooda SERP taariikhaha la xushay iyo sida ay isu beddeleen, marka loo eego muddadii hore.
Waxaad fursad u leedahay inaad ku shaandhayso xogta miiska jaangooyooyin kala duwan:
Furaha ereyga ama qaybtiisa
URL ama qaybtiisa
Tusaale ahaan, waad shaandhayn kartaa dhammaan bogagga u ku habboon ereyga muhiimka ah ee ay ka kooban tahay erayga '' soo iibs '' isla markaana leh jagooyinka TOP-1 ee natiijooyinka raadinta dabiiciga ah.
Jadwalkan ayaa sidoo kale ku tusaya:
Erayada furaha ee degelku u adeegsado natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google
URL ee boggaga darajooyinka websaydhka iyo jagooyinkooda SERP ee eray-bixin gaar ah.
Booska bogga bogga Google TOP ee ereyga bartilmaameed ee la cayimay taariikhda la cayimay.
Isku celceliska tirada raadinta billaha ah ee bartilmaameedka bartilmaamed ee matoorada raadinta Google.
Qaybtaan, waxaad ka heli doontaa bogag ku wada socda shabakadaada. Si taxaddar leh isaga taxaddar ugu yeelo: hagaaji khaladaadkooda bog-ga ah ee SEO-ga ah, ku dar waxyaabo gaar ah, oo kor u qaad boggaggan si aad uga hesho taraafikada dabiiciga ah ee raadinta Google. Tan gudaheeda, natiijadu waxay ku tusi doontaa:
Bogagga ugufiican waqtiga: waxaad heli doontaa jaantus muujinaya isbeddelada tirada bogagga websaydhada Google TOP ee wareegga nolosha ee mashruuca oo dhan. Kadib Adigoo ku beddelaya qiyaasta, waxaad daawan kartaa xogta toddobaad ama bil.
Kala duwanaanshaha: halkan, waxaad ka heli kartaa tirada bogagga boggaga Google TOP 1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah, marka loo eego taariikh hore.
Xaashiyaha bogagga ereyga furaha ah: halkan, shaxdu waxay muujineysaa isbeddelada lambarka furayaasha bogagga la xulay ay ku jireen Google TOP dhammaan wareegga nolosha ee mashruuca.
Qaybtan, waxaad ka heli doontaa dhammaan shabakadaha ku qiimeeya Google TOP 1-100 ereyada muhiimka ah ee lamid ah kuwa websaydhka ay ku jiraan. Soo ogow booska ay shabakaddaadu ka dhexeyso tartamayaashaaga tirada dhammaan furayaasha ereyga ee TOP-100
Baro haddii Google ula dhaqmayso boggaaga sida il gaar ah ama yaanu ahayn. Halkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad fiiriso boqolkiiba inta saxda ah ee waxa ka soocaaga, aad u ogaato waxa qaybo ka mid ah qoraalka loo xardhay, oo ka fiirso ilaha aasaasiga ah.
Hubinta midaynta bogga
Soo ogow in Google uu ula dhaqmo websaydhka sidii mid gaar ah iyo in kale. Xitaa haddii aad hubto in waxaagaagu gaar u yahay, waxaa laga yaabaa inuu qof kale soo guuriyey. Haddiise websaydhka kale oo aad la wadaagto mid ka dheereeya kanaga, Google ay u aragto inay tahay isha koowaad ee nuxurka, halka websaydhkaaga lagu calaamadayn doono khayaano. Maskaxda ku hay in boqolkiiba inta ugu badan ee mareegta nuqul ka mid ahi ay u horseedi karto ciqaab Google.
Ujeedada ugu weyn ee hubinta kala soocida bogga
Ujeedada ugu weyn ee adeegga hubinta u gaarka ah bogga ayaa ah in la ogaado waxa ka xaday tartamayaasha, kuwaas oo qoraagu u tegi karo, iyo goobtaada ayaa noqon doonta mid laba-laable ah oo aan waligeed jago sare qaban.
Xaqiijinta waxay ka dhacdaa saddex tallaabo oo yaryar. Marka hore, waxaad ku tilmaameysaa cinwaanka goobta, qeybta URL, ka dibna waxaad ku muujineysaa inaad rabto inaad ku sameyso xaqiijintaada caalamiga ah (google.com (All) - Caalamiga)) ama kaliya websaydhka Faransiiska (google.fr (Faransiis)) - Faransiiska), oo hadda waxaad bilaabeysaa xaqiijinta adoo riixaya badhanka CHECK cagaaran. Waan baari doonaa oo waxaan soo bandhigi doonaa dhammaan qaybaha.
Kadib, waxaad ka hubin kartaa qayb kasta hal guji!
Mashiinka raadinta ayaa inta badan u tixgeliya boggan mid gaar ah. Jagooyinka websaydhku waxay u kori karaan iyaga oo aan laga xanibnayn SERP.
Mashiinka raadinta ayaa inta badan u tixgeliya waxa ku yaal boggan bog dib-u-qori. Meelaha websaydhku way koraan karaan ama, ugu yaraan, kama sii dari doonaan. Si kor loogu qaado boggaaga internetka, abuuro waxyaabo ka sii gaar ah oo waxtar leh.
Mashiinka raadinta ayaa inta badan u tixgeliya waxa ku jira boggan inay yihiin khiyaamo. Koritaanka booska ayaa ah wax aan macquul aheyn. Waa inaad ku beddelato waxaaga hadda jira mid gaar ah.
Dhammaan qaybahaas ka dib, waxaad sidoo kale ku arki kartaa natiijadaada laba qaybood oo waaweyn, kuwaas oo ah:
Nuxurka: Halkan, waxaad ka heli kartaa dhammaan qoraalada qoraalka ah ee ay Googlebot ku aragto websaydhka la siiyay. Qeybaha nuqul ka kooban ee la soo koobay ayaa la muujiyay.
Isha asalka ah ee asalka ah: Halkan, websaydhada ay Google ula dhaqmayso sida ilaha aasaasiga ah ee waxyaalaha la soo bandhigay waxay ku qoran yihiin jadwalkaan. Markaa, waad hubin kartaa qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira bog kasta oo ka mid ah websaydhadaas.
Ogsoonow inaad kula kulmi kartid kooxda Semalt wixii su'aalo ah ee ku saabsan xalka u gaarka ah boggaaga.
Maaree boggag internetyo badan leh adoo adeegsanaya adeegsade-adeegsadeha-saaxiibtinimo. U gudbi mareegahaaga ama URL-yo gaar ah Google oo raadraacyadooda si fudud. Hubso inaad abuurto koonto Google si aad uheshid qaybta Google Webmasters.
Maamulaha webka Google waa adeeg muujinaya sida websaydhkaagu uga muuqdo natiijooyinka raadinta Google wuxuuna kaa caawinayaa inaad ogaato arrimaha tilmaanta. Boggan websaydhka, waxaad ku soo gudbin kartaa boggagaaga iyo boggaga shabakadda sidii liistada oo dhan oo waxaad ka dalban kartaa tilmaanta Google.
Hantiku wuxuu ka kooban yahay: Kala shaandhee natiijooyinka URL ama qaybtiisa. Waxaad ka heli kartaa URL-yada ka kooban ama aan ku jirin erey gaar ah iyo sidoo kale isku-habboonaanta URL-ka.
Qiyaasayaashan ayaa muujinaya sida ugu waxtarka badan ee boggaagu u yahay. Waxaad u daawan kartaa iyaga maalin cayiman / waqti cayiman oo is barbar dhiga xogta. Adeeggan wuxuu kaa caawinayaa ogaanshaha awooda websaydhkaaga iyo khaladaadka ka horjoogsanaya in lagu meeleeyo TOP 1
Balooggan, waxaad u gudbin kartaa boggaga shabakadda ee Google si aad u aragto khariidadaha kombiyuutar ee la tilmaamay iyo kuwa khaladaadka qaarkood leh. Xullo bog si aad u aragto liistada boggaga.
Hubi haddii rarka boggaagu uu buuxiyo shuruudaha Google. Halkan waxaa lagu siin doonaa macluumaadka ku saabsan khaladaadka jira ee ay tahay in la hagaajiyo iyo sidoo kale talooyinka ku saabsan sida kor loogu qaado waxqabadka boggaaga.
Muxuu xawaaraha degmadu muhiim u yahay?
Xawaaraha uu degelku xamuulku waa qayb ka mid ah mudnaanta koowaad. Waqti dheeri ah oo waqti dheer ayaa si xun u saameynaysa booska natiijooyinka. Yandex iyo Google ayaa doorbida ilaha dhaqsaha badan.
Waqtiga ugu habboon ee lagu ridayo waa 2-3 ilbiriqsi. Ku habboon - waqtiga jawaabta isticmaalaha waa 0.5 sekan.
Maanta, dhagaystayaasha internetka badankood waxay adeegsadaan aaladaha mobilada si ay u booqdaan goobaha. Oo iyagu waxay leeyihiin marinno aad u gaabis ah iyo ilo gudaha ah marka loo eego kombiyuutaro shaqsiyadeed.
Qof walba wuu ogyahay in meel gaabis ah uu xun yahay. Haddii goobta ay si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sameysay u isticmaasho, booqdayaashu waxay leeyihiin dhibaatooyin daran oo xallinta howlahooda, intaas ka sarreysana, waa wax aad looga xumaado.
Laakiin xitaa haddii xaaladda sahayda websaydhadu ay tahay wax iska caadi ah, dib-u-dhac yar oo ku yimaada soo-bandhigista goobta waxay ku keentaa luminta dhagaystayaasha iyo hoos u dhaca heerka beddelka.
Khubaro ku xeel dheer dukaamada internetka ayaa ogaadey in marka xawaaraha deg degga ah uu hoos ugu dhaco 100 ms, iibkooda isla markaaba hoos u dhaca 1%.
Sidaa darteed, dhibaatada xawaaraha raritaanka goobta ayaa u baahan in si dhakhso leh loogu xalliyo dhowr jiho.
Iyo sabab wanaagsan, Semalt wuxuu soo saaray qalabkan falanqaynta xawaaraha ee Bogaga si uu u falanqeeyo dhammaan cabbiraadaha suurtagalka ah ee la xiriira xawaaraha bog iyo bogag gaar ah: Raadi sida ay u shaqeyso.
Falanqaynta xawaaraha xawaaraha ayaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo in wakhtiga rarka websaydhku uu buuxiyay shuruudaha matoorada raadinta Google. Waxay sidoo kale cadeyneysaa khaladaadka in la hagaajiyo oo la yimaada horumar la sameyn karo si kor loogu qaado wakhtigaaga websaydhka.
Falanqaynta kadib, waxaad heleysaa oo keliya warbixinta nooca kumbiyuutarka, laakiin sidoo kale nooca mobilada.
Natiij kasta, waxaad arki doontaa:
Waqtiga xaddiga bogga: cadadka waqtiga ay ku qaadaneyso bogga inuu si buuxda ula falgalo.
Hantidhawrka guuleysta: Tirada xisaabaadka uu boggaagu si guul leh ku dhaafay.
Ciladaha hagaajinta: hagaajinta khaladaadkaas waxay ka caawin doonaan boggaaga inuu si dhakhso leh u raadsado
Semalt, waxaad sidoo kale codsan kartaa la tashi bilaash ah oo aad ku ogaato sida loo hagaajiyo mareegtadaada: